I-Apericena Cocktail neLounge Bar - I-Frum 61 Messina
I-Cocktail, i-Apericena ne-Lounge Bar - I-Frum 61 Messina
Ubuhle ngazo zonke izinhlobo zawo.
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-23)
Kukhona I-Cocktail neLounge Bar a Messina lapho ubuhle nokuchichima kwakho konke ama-titbits Iziphakamiso zihambisana nomusa owedlulele nokusizakala komnikazi kanye nabahlanganyeli. Kumayelana I-Frum 61, imnandi kakhulu iphuzu lomhlangano, Ibha lekhofi e I-Lounge Bar, nge-assortment enkulu ye I-cocktail, izifiso zokudla, kuqala futhi izifundo eziphambili, amasaladi futhi ucebile i-aperitif.
I-Apericena, i-Cocktail kanye neLounge Bar lapho izidlela zobuchopho zihambisana khona nozwela
Maphakathi Messina usanda kuvula a ukuthokozela okwasendaweni osekhombisile umlingiswa omkhulu nesifiso sokwenza kahle: kumayelana I-Frum 61, a cocktail e I-Lounge Bar enikezela konke endaweni eyodwa iziphakamiso ezihlwabusayo ze-gastronomic of a isitolo se-ayisikhilimu, ibha yekhofi e gastronomy beka ndawonye. Kusuka I-Apericena kuma-dessert, lapha ubumnandi buthikiswa yizo zonke izinhlobo zokudla kwezihlahlana, kanye ne Uphuze kahle kuxutshwe uhlobo uweta wotshwala enkantini, UFranco. Umlando wale ndawo uyaheha futhi uyaheha ngasikhathi sinye. Yasungulwa ngu-Emanuele, "indodana yobuciko" owayesevele ephethe iBar del Tribunale, futhi ezinikele enkumbulweni kayise owadala i-1961, ngaphakathi kwenye indawo yokudlela eyingqophamlando e Messinait Khetha Ibha, okumnandi kakhulu isiphuzo sezithelo ngesisekelo se Iwayini elomile elikhazimulayo. Lokhu Uphuze, iphayona lokuqala i-cocktail, wabizwa ngokufanele "The Imigqomo"Okumnandi esibukweni nasemehlo, i-Frum imele into entsha edolobheni Uphuze. Namuhla, "I-Frum 61"kuyakuhlonipha lokhu I-cocktail nomqambi wayo.
Ukusuka kuma-croissants for ibhulakufesi kuya e-Apericena eningi kubha yokuphumula enomoya ongenakuphikiswa
Izigodlo zabancane nabadala ziphekelwa zonke izinsuku I-Lounge ne-Cocktail Bar I-Frum 61, sibonga umuntu ocebile kakhulu e okumnandi imenyu lokho kudlula ama-croissants ngebhulakufesi kuze kube mnandi ikhefu lasemini nezicebi isidlo. Kusuka kunhle futhi kuhlanjululwe I-Cocktail neLounge Bar, uzokunika iziphuzo eu Uphuze kuqabula futhi kudakise kakhulu. Okuhle kakhulu futhi kunomusa omkhulu Bartender ozoxuba I-cocktail, oludakayo noma ongaphuzi utshwala, ofanele kakhulu ukwanelisa ukoma kwakho. Ukwanelisa isifiso sakho sokuhle, khona-ke, uzoba nohlu olubanzi lwe ama-titbits ukukhetha kusuka. Uhlu lubandakanya: ama-aperitifs ayisisekelo e ama-aperitifs aqinisiwe, i-aperitif ngokusekelwe ku inyama e inhlanzi, izifundo zokuqala ezishisayo nezibandayo, izifundo eziphambili yenyama nenhlanzi, amasaladi, sandwich, i-pan pizza nenyama emnandi namabhodi okusika izinhlanzi. Futhi ngaphezulu: i-slush, u-ayisikhilimu owenziwe ekhaya, ikofi, isiphuzo sezithelo ne-cappuccino. Kuyatholakala iziphakamiso gastronomic senza gluten futhi ngaphandle i-lactose. Ubuhle be ukudla okuhlongozwayo kuhlanganiswa nomusa ozwela nokuzwela okungaphezulu komnikazi, u-Emanuele, yena, kanye nabasebenzi bakhe abaqeqeshiwe, bazokukhanyisa umuzwa wakho wokunambitha ngamahlaya amaningi amahle. I-Frum kuyasiza Indawo yokudlela, uhlela amaqembu nezinsuku ezithile, wenza insiza yokuthatha uhambo, ukulethwa kwasekhaya futhi uhlela ubusuku obuhle be-Karaoke. Kusihlwa enokudla ukuhaha kwensimbi.
Ikheli: UVia Tommaso Cannizzaro, 188
I-POSTAL CODE: 98122
Ucingo: 090 9213943
Umakhala ekhukhwini: 347 4108323
Ifasitela lesitolo: www.asinaziong.com
Inombolo ye-VAT: 03572950834